LUPIT | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
Watch LUPIT here
October 23, 2009 — mmweather
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း LUPIT အားဆက်လက်လေ့လာလိုပါက ဤစာမျက်နှာတွင် ဆက်လက် ကြည့်ရှုပေးပါရန်။
Posted in Education, Weather News. Tags: LUPIT, weather. LeaveaComment »
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဦးမည်လော?
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT ၏ လမ်းကြောင်းအခြေအနေမှာ ပြီးခဲ့သည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA ကဲ့သို့ မရေမရာ အခြေအနေသို့ ဖြစ်လာနေကြောင်း တွေ့ရပြန်ပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှစတင်၍ မုန်တိုင်း LUPIT သည် မြောက်ဘက်မှာ အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် သို့ ပြန်လည်ဦးလှည့်ကာ ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ဆီသို့ ဦးတည်နိုင်ကြောင်း ဂျပန်မိုးလေဝသဌာနမှ လာမည့် ၅ ရက်ကြိုတင် ခန့်မှန်းချက်ပြပုံတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင် Fujiwhara effect ကဲ့သို့ အင်အားပြင်း သည့် စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခု အနီးတွင် ရှိနေ၍ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းကား မဟုတ်ပါ။ ဒေသအတွင်းဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်း/များမှု အခြေအနေများကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်မိုးလေဝသဌာန ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ခြောက်သွေ့အေးမြသောလေများ မုန်တိုင်းဗဟိုသို့ စီးဝင်မှုကလည်း မုန်တိုင်းကို အားလျော့စေပါသည်။ တောင်ဘက်သို့ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းပြောင်းလာပြီး ပူနွေး၍စိုထိုင်းဆများသည့် လေများနှင့် ထိတွေ့မှု မရှိမချင်း မုန်တိုင်းမှာ အားပြန်ကောင်းလာလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု WUND မှ မိုးလေဝသပညာရှင် တစ်ဦး၏ ဆောင်းပါး၌ ရေးသားဖေါ်ပြထားသည်ကို မှတ်သားရပါသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွက် စိတ်အေးရမည့်အခြေအနေဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်၊ လုံးဝစိတ်ချရသော အနေအထားကား မဖြစ်သေးပါ၊ လာမည့် ၄၈ နာရီ – အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီ 00:00 UTC အထိစောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးသော အခြေအနေများအရ မုန်တိုင်း၏ လမ်းကြောင်းမှ မူလ ခန့်မှန်းထားသည့် လမ်းကြောင်းမှ မြောက်ဘက်သို့ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲ ရွေ့လျားနေကြောင်း တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
မိုးလေဝသဌာန ၆ ခုမှ ခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းများတွင် JTWC မှ အပ ကျန်နိုင်ငံများက အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ပြန်လည်ဦးတည်ရွေ့လျားနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည့်ပုံ ကို ယခုလိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
Posted in Education, Weather News. Tags: LUPIT, tropical-storm, typhoon, weather. 1 Comment »
23OCT-တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT update-01
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT သည် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်အထိ လျော့ကျသွားပြီဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားမှာလည်း အချင်း ၄၈ဝ နော်တီကယ်မိုင်(၅၅၂ မိုင်) သို့ အနည်းငယ်လျော့သွားကြောင်း T2K Storm Track #024 တွင်ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆း၃ဝ တွင်ရရှိသော TSR data အရ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း LUPIT သည် ထိုင်ဝမ်ကျွန်း တောင်ဘက်စွန်းရှိ HENGCHUN နှင့် MANJHOU မြို့များ၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၂၇ဝ ခန့်သို့ ရောက်ရှိဗဟိုပြုကာ အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၉ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။
၄င်းသည် လာမည့် ၄၈ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် မြောက်ဘက်သို့ဦးတည်ရွေ့လျားနိုင်ဘွယ်ရှိပြီး ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတောင်ဘက်ပိုင်းသို့ ဦးတည်နိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။
ယနေ့နံနက် ဝ၉း၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသော ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံ
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: LUPIT, tropical-storm, weather. 1 Comment »
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPITမြောက်ဘက်သို့ဦးတည်မည် update-3
October 22, 2009 — mmweather
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT အတွက် ယနေ့ နေ့လည် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီရရှိသော data များအရ လမ်းကြောင်းအနေအထားမှာ မြောက်ဘက်သို့ ထပ်မံ ၁၂ မိုင်ခန့် ရွေ့သွားကြောင်းတွေ့ရသဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွက် ပိုမို သက်သာရာရသွားပြီး တရုတ်တောင်ပိုင်းနှင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတို့အတွက် စိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်။
မုန်တိုင်းသည် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတောင်ဘက် Hengchun ၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၃၁ဝ မိုင်ခန့်၊ ဖိလစ်ပိုင်မြောက်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းအရှေ့ဘက် ၁၃၅ မိုင် ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး အဆင့်-၁ CAT-1 တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအင်အားဖြင့် အနောက်ဘက် သို့ တစ်နာရီလျှင် ၅ မိုင်နှုန်းဖြင့်ဆက်လက် ရွေ့လျားနေပါသည်။ မုန်တိုင်း၏ အရွယ်အစားမှာ လျော့ကျသွားခြင်း မရှိဘဲ လက်ရှိဦးတည်လျှက်ရှိသည့် နေရာမှာ ဖိလစ်ပိုင်Cagayan ကျွန်း၏ မြောက်ပိုင်းကန်းရိုးတန်းသို့ ဖြစ်ပါသည်။ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၇၅ မိုင်မှ မိုင် ၉ဝ နှုန်းအထိ လျော့ကျသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: LUPIT, typhoon, weather.3Comments »
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT ၏ မုန်တိုင်းမျက်စေ့ ဖိလစ်ပိုင်မြောက်ပိုင်းနှင့်လွတ်နိုင်
ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၆း၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် TSR data များအားပုံဖေါ်ထားသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT ၏လမ်းကြောင်းနှင့် အင်အားပြပုံတွင် လက်ရှိအချိန်၌ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစွန်းရှိ Palui ကျွန်း၏ အနောက်ဘက် မိုင် ၁၇ဝ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုလျှက်ရှိပြီး အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၆ မိုင်နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ရရှိသည့် data များကို ပုံဖေါ်ထားသည့် လမ်းကြောင်းနှင့် သိသိသာသာ ကွဲလွဲသွားပြီး လာမည့် ၄၈ နာရီ (အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် 0000 GMT) တွင် စတင်၍ အနောက်မြောက်ယွန်းယွန်းသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းကာ Calayan-Cagayan ကျွန်းဆီသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့်အနေအထားတွေ့ရပါသည်။
ဤသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းရွေ့လျားမည့်အခြေအနေကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသများသို့ မုန်တိုင်းတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်မည့် အန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းနိုင်သော်လည်း အချင်း မိုင် ၅ဝဝ ကျော်ရှိသည့် အရွယ်အစားကြီးမားမှုကြောင့် လုံးဝလွတ်ကင်းနိုင်မည်တော့ မဟုတ်ကြောင်း ခန့်မှန်းရပါသည်။ လက်ရှိလေတိုက်နှုန်းအရ တစ်နာရီလျှင် မိုင်၁ဝဝ အထက်ရှိသည့် လေပြင်းများနှင့် မိုးသည်းထန်မှုအန္တရာယ်ကိုတော့ ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းတင်ပြအပ်ပါသည်။
TSR ၏ လာမည့် ၇၂ နာရီ ခန့်မှန်းချက်ပုံအရ ဖိလစ်ပိုင်မြောက်ပိုင်းစွန်းမှ ဖြတ်ကျော်ပြီးလျှင် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းသည် အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: LUPIT, typhoon, weather. 1 Comment »
22OCT-တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT update-01
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် ၃၅၅ မိုင်ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး၊ လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီအတွင်းက အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၆ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိနေပြီး ကုန်းတွင်းသို့ မုန်တိုင်း၏ဗဟိုချက် တစ်နာရီလျှင် အမြင့်ဆုံး ၁၈၅ ကီလိုမီတာ ၁၁၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးသည့်အခါ အနောက်-မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်မည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသည်။
မုန်တိုင်း၏ အရွယ်အစားမှာ ပိုမိုကြီးလာပြီး အချင်း ၉၂၅ ကီလိုမီတာ (၅၇၅ မိုင်) ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိမုန်တိုင်းအဆင့် CAT-2 သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း TSR ထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် ၂၄ တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။
မြန်မာစံတော်ချိန် ယနေ့နံနက် ဝဝး၃ဝ နာရီတွင် ထုတ်ပြန်သော TSR သတိပေးချက်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအား CAT-1 အဆင့်နှင့် အထက်ဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်း ၆ဝ% အထိ မြင့်တက်လာပြီး၊ Soliven (17.0 N, 122.4 E) Laoag (18.2 N, 120.7 E) Vigan (17.5 N, 120.5 E) San Jose (15.8 N, 121.5 E) တို့အတွက် အဝါရောင်အဆင့် ဖြစ်နိုင်ခြေ သတိပေးချက်အသီးသီးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ TSR သတိပေးချက် 21OCT-1800GMT မူရင်းအားအောက်တွင်ဖေါ်ပြပေးထားပါသည်။
Storm Alert issued at 21 Oct, 2009 18:00 GMT
Typhoon LUPIT is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
probability for CAT 1 or above is 60% in about 36 hours
probability for CAT 1 or above is 25% in about 36 hours
Vigan (17.5 N, 120.5 E)
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT ယနေ့ည CAT-2 ပြန်ဖြစ်လာမည်
October 21, 2009 — mmweather
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT သည် ယနေ့ည မြန်မာစံတော်ချိန် ၁ဝနာရီခန့် ဒေသစံတော်ချိန်ညသန်းခေါင်ယံကျော်လျှင် အဆင့်-၂ CAT-2 တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ပြန်လည်အားကောင်းလာကာ Baguio မြို့၏ အရှေ့မြောက် မိုင် ၃ဝဝ ခန့်သို့ ဗဟိုပြုရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသော ကမ်းခြေမှ မိုင် ၁၈ဝ ခန့်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်း၏ ရှေ့ပိုင်းသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းအား စတင်၍ တိုက်ခတ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: LUPIT, typhoon, weather. LeaveaComment »